Re कारण तपाईंको ईमेल सूची सफा गर्ने र कसरी ग्राहकहरू हटाउने Martech Zone
हामी भर्खरको ईमेल मार्केटिंगमा धेरै फोकस गर्दैछौं किनकि हामी वास्तवमै यस उद्योगमा धेरै समस्याहरू देखिरहेका छौं। यदि कार्यकारीले तपाइँलाई तपाइँको इ-मेल सूची वृद्धिमा परीक्षक गर्न जारी राख्छ भने, तपाइँ साच्चै तिनीहरूलाई तिनीहरूलाई यो लेखमा देखाउनु पर्छ। तथ्य यो हो कि तपाईको ईमेल सूची ठूलो र पुरानो हो, तपाईको ईमेल मार्केटि effectiveness प्रभावकारितामा यति धेरै क्षति हुन सक्छ। तपाई, यसको सट्टामा, ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्छ तपाईको सूचीमा कति सक्रिय सदस्यहरू छन् - ती क्लिक वा रूपान्तरण।
तपाईंको ईमेल सूची सफा गर्नका कारणहरू
प्रतिष्ठा - ISP हरू ब्लक वा तपाईंको ईमेल जंक फोल्डरमा खराब आईपी पठाउने प्रतिष्ठामा आधारित। यदि तपाईं जहिले पनि खराब ईमेल ठेगानाहरू पठाउँदै हुनुहुन्छ, यसले तपाईंको प्रतिष्ठामा असर पार्नेछ।
कालोसूची - यदि तपाईंको प्रतिष्ठा पर्याप्त छ भने, तपाईंको सबै ईमेल ब्लक हुन सक्छ।
राजस्व - यदि तपाईंको अधिक ईमेलले यसलाई सक्रिय ग्राहकहरूको साथ इनबक्समा बनाउँदैछ, यसले अधिक राजस्व उत्पन्न गर्दछ।
लागत - यदि तपाईंको ईमेलको आधा आधा ईमेल ठेगानाहरूमा जान्छ भने, तपाईं आफ्नो ईमेल विक्रेतासँग के हुनु पर्छ भनेर दुईपटक भुक्तान गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईंको सूचि सफा गर्दा तपाईंको ESP लागत कम हुनेछ।
लक्षित गर्दै - तपाइँको निष्क्रिय ग्राहकहरूको पहिचान गरेर, तपाईं तिनीहरूलाई सीधा पुनः संलग्नता प्रस्ताव पठाउन सक्नुहुनेछ, तिनीहरूलाई सोशल मिडियामा लक्षित गर्नुहोस्, र हेर्नुहोस् यदि तपाईं तिनीहरूलाई पुनः संलग्न गराउन सक्नुहुन्छ।
सम्बन्ध - सफा सूचि राखेर, तपाईलाई थाहा छ कि तपाई ग्राहकहरु संग संलग्न हुनुहुन्छ कि ख्याल राख्नुहुन्छ ताकि तपाई आफ्नो सन्देश लाई राम्रोसंग ध्यान दिन सक्नुहुन्छ।
रिपोर्ट - सूची आकार को बारे मा चिन्ता र संलग्नता मा ध्यान दिएर, तपाईं आफ्नो पोषण र ईमेल प्रोग्रामहरू कती राम्रो सञ्चालनमा छन् भन्नेमा धेरै सटीक डाटा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
हामी हाम्रा पार्टनरहरूको सिफारिस गर्दछौं तपाईको लागि नेभरबउन्समा ईमेल प्रमाणीकरण सेवा! उनीहरूको स्वामित्व एल्गोरिदम र तेस्रो-पार्टी प्रमाणिकरणले हाम्रो ग्राहकहरूको डेलिभरेबिलिटीमा ठूलो फर्क ल्याएको छ। कहिले नउठ्ने एक प्रस्ताव एक 97% सटीकता ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ। (Valid% भन्दा बढि तपाईंको मान्य ईमेलहरू हाम्रो सेवा प्रयोग गरे पछि बाउन्स हुन्छ, ती फर्काउनेछ।)
नबन्सन सुविधाहरू समावेश:
१२-चरण प्रमाणिकरण प्रक्रिया - MX, DNS, SMTP, SOCIAL, र ठेगानाहरूको मान्यताको निर्धारणमा अतिरिक्त प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर, हाम्रो स्वामित्व १२-चरण प्रमाणिकरण प्रक्रियाले प्रत्येक ईमेललाई बिभिन्न स्थानहरूबाट times 12 पटकसम्म विश्वव्यापी स्थानहरूमा जाँच गर्दछ।
नि: शुल्क विश्लेषण उपकरण - कुनै शुल्क बिना तपाईको डेटाको परिक्षण गर्नुहोस्। हामी फिर्ता रिपोर्ट गर्नेछौं कि यो पठाउन सुरक्षित छ वा अनुमानित बाउन्स रेटको साथ सफा गर्न आवश्यक छ। नेभरबौंसको ग्राहकको रूपमा तपाईसँग यस सुविधाको असीमित प्रयोग छ। थप रूपमा, तपाई तिनीहरूको नि: शुल्क विश्लेषण आफैंको प्रणालीमा निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो एपीआई मार्फत कुनै मूल्य बिना।
नि: शुल्क सूची स्क्रबिंग - नेवर्नबाउन्सले तपाइँको कामको लागि कुल लागत प्रदान गर्नु अघि नि: शुल्क डि-डुप्लिकेसन र खराब सिन्ट्याक्स हटाउने प्रस्ताव गर्दछ। हामी कहिले स्क्रबिंगको लागि चार्ज गर्दैनौं।
तिनीहरू कहिले पनि ऐतिहासिक डाटा प्रयोग गर्दैनन् - ईमेल निरन्तर परिवर्तन हुन्छ, र प्रायः सबै प्रमाणिकरण कम्पनीहरूले ऐतिहासिक परिणामहरू प्रदान गरेर लागत बचत गर्दछ, हामी तपाईंको ईमेलहरू प्रत्येक चोटि प्रमाणित गर्दछौं, भर्खरको र सबैभन्दा सही प्रतिक्रिया सुनिश्चित गर्दै। ब्यापारमा सब भन्दा छिटो टर्नअराउन्ड समयको साथ तपाईले आफ्नो सूची सफा गर्न र प्रमाणित गर्न लामो समय कुर्नु पर्दैन।
अब नि: शुल्क आफ्नो ईमेल सूची विश्लेषण गर्नुहोस्!
बाट यो इन्फोग्राफिक ईमेल भिक्षुहरू यसले ग्राहकहरूको सफा गर्न र तपाईंको ईमेल सूची राम्रोसँग सफा गर्नका लागि चरणहरूको सूची प्रदान गर्दछ।
टैग: सक्रिय ग्राहकहरुबाउन्स-ब्याक्ससफा ईमेल सूचीछुटकाराईमेल सफा गर्नुहोस्ईमेल सफाईईमेल लागतईमेल प्रतिष्ठाईमेल राजस्वईमेल विभाजनईमेल सेवा प्रदायकईमेल ग्राहकईमेल प्रमाणिकरणespesp लागतनिष्क्रिय ग्राहकहरुशुद्ध ग्राहकहरुपुनः संलग्नता